लडेर घाइते भएपछी नारायणकाजीको घरदैलो कार्यक्रम स्थगित – YesKathmandu.com
लडेर घाइते भएपछी नारायणकाजीको घरदैलो कार्यक्रम स्थगित
बुधबार २२, कार्तिक २०७४
गोरखा । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एबम आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गोरखा क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठ चुनावी प्रचारप्रसारकै क्रममा लडेर सामान्य घाइते भएका छन्।
सौरपानीमा मंगलबार आयोजित चुनावी सभाका क्रममा उनी रडमा अल्झिएर लडेका थिए । उनको दायाँतर्फ निधार र दायाँ खुट्टामा चोट लागेको छ ।सोही कारण उनले बुधबार बारपाकमा घरदैलो कार्यक्रम गर्न सकेनन् । बारपाकमा अहिले सुरु भएको चुनावी सभाका क्रममा पनि उनी गाडीमै कार्यक्रम स्थलसम्म पुगेका थिए । पैदल यात्रा गर्दै उनले स्थानीय बासिन्दासँग भेटघाट गर्न पाएनन् ।
बुधबार दिनभर विनासकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दु बारपाकका घर-घरमा पुग्ने उनको योजना थियो । उक्त योजना स्थगित भएको छ ।गोरखा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराइसंग चुनावी प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। श्रेष्ठलाई बाम गठबन्धनको समर्थन रहेको छ भने भट्टराईलाई लोकतान्त्रिक गठबन्धनको।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि भूपू सैनिक तथा प्रहरी संगठनले गर्यो यस्तो योगदान
अनुमतिबिना कोकाकोला कम्पनी सञ्चालनमा
दोहोरो नागरिकता लिएको पाइएपछि वडाअध्यक्षको उम्मेदवारको नागरिकता खारेज
घरबेटीको दादागिरीले बहालमा वस्नेलाई सास्ती
मेरो प्रेम वा मागी विवाह हुन्छ भागी विवाह हुँदैन : राष्ट्रपतिकी छोरी
नागरिक पीडामा रोइरहेका बेला नेता यादव छोराको बिहेका लागि स्कार्पियो र बोलेर जोड्न मस्त
अभिनेत्री गौरी मल्लमाथी यौन दुब्र्यबहार
प्रमाणित भ्रष्टाचारी चुनाव लड्न पाउने ब्यवस्थाको पक्षमा उभिए राधेश्याम अधिकारी
निकुञ्ज कर्मचारी चौधरीको हत्याराहरुलाई ३४ वर्षको जेल सजाय
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड सम्पन्न गर्नेमिति थपियो
भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन रु २१ लाख
बामलाई छोडेर लोकतान्त्रिक गठबन्धनसँग नयाँ सहमति गर्न माओवादीलाई कांग्रेसको प्रस्ताव-अनन्त
‘गठबन्धन गर्दा नै आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो’